Peskobeton यो सामाग्री वर्तमानमा screeds, नींव, तत्व बेन्चहरूले, Flowerpots, कदम र जस्तै। डी घनघोर लागि अभिप्रेरित सुक्खा दबाव क्षतिपूर्ति संरचना दुवै निजी मा धेरै लोकप्रिय छ र ठूलो विकासकर्ताहरूले छ। विशेष peskobeton M300 प्रयोग भवनहरु र सुविधाहरु को निर्माण र मर्मत मा साधारण। यो सामाग्री को खपत, को सिमेन्ट तुलना, पाठ्यक्रम, ठूलो हुनेछ। तथापि, peskobeton त्यस्ता तत्त्वहरू र सुक्खा मिश्रण को मार्गदर्शन तयारी यसलाई अलग गर्न बालुवा sieving रूपमा सञ्चालनका लागि कुनै आवश्यकता लागू गर्दा।
ब्रान्ड र आमा को संरचना
Peskobeton मिश्रण भवनहरु र संरचना निर्माणमा प्रयोग भएको थियो समाप्त सतह दबाब 300 किलो / सेमी2भन्दा बढी मात्र गर्न सक्नुहुन्छ छैन। M200 देखि M500 गर्न - यो सामाग्री को धेरै ग्रेड छन्। Peskobeton हुन्छन्:
बालुवा निर्माण। 0.5 देखि7मिमी - अंश यो फरक हुन सक्छ।
पोर्टल्याण्ड M400 र M500 सीमेंट।
additives र plasticizers को विभिन्न प्रकार।
ब्रान्ड peskobeton सिमेन्ट निर्माण को लागि प्रयोग ग्रेड, साथै फिलर अंश को आकार मा निर्भर गर्दछ। बेहतर बालुवा, को denser र बलियो प्राप्त erected संरचना।
यो सामाग्री ग्रेड, निजी आवास निर्माण मा उल्लेख रूपमा, प्राय प्रयोग गर्नुहोस्। M300 आन्तरिक र बाह्य काम को लागि दुवै हुन सक्छ peskobeton लागू हुन्छ। यो फर्श छन् बनाएका slabs, नींव, पर्खालहरु, पर्खाल र यति मा। डी तर अक्सर विशेष यो सामाग्री गैरेज, basements र घरहरू मा screed भर्न प्रयोग गरिन्छ देखि। यी जहाँ peskobeton M300 लागू मुख्य क्षेत्रमा छन्। यो सामाग्री को खपत अपेक्षाकृत उच्च छ, तर गुणस्तर र यो उत्कृष्ट छ।
cheapness बाहेक यो चिन्ह peskobeton को मुख्य लाभ समावेश:
उच्च घनत्व र समाप्त निर्माण को बल;
यो सामाग्री को विपक्ष व्यावहारिक उपलब्ध छैन। यो बेफाइदा, समीक्षा गरेर न्याय, उपभोक्ताहरु अझै पनि सुविधाजनक प्याकेजिङ्ग (एकदम भारी 40 को बैग र 50 किलो बोक्न) र बैग आफूलाई को unreliability बोक्न। पनि बिक्री मा अक्सर बालुवा ठोस को counterfeits छन्। त्यसैले, जब तपाईँले किन्न थप ध्यान हुनुपर्छ।
बालुवा ठोस M300 बनेको केही नियमहरू पालना गर्नुपर्छ संरचना निर्माण मा कुनै पनि अन्य सामाग्री संग रूपमा। यो सामाग्री प्रयोग गरेर फिलर व्यवस्था गर्न वा कुनै पनि ठोस संरचना मर्मत गर्न, पूर्व तयारी उत्पादन गर्नुपर्छ मानिन्छ गर्दा। यसलाई लागू गरिन्छ भएको सतह, एक अनिवार्य सबै छाडा अंश हटाउँछ, साथै माटो र धूलो, रंग, वार्निश, तेल, र यति मा। डी बाट साफ हुनुपर्छ।
एक युग्मक गर्न peskobeton M300 खपत
त्यसैले, पहिले नै उल्लेख रूपमा, यो सामाग्री मुख्य रूप उच्च गुणस्तरीय सम्बन्ध सुरुवातको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो घरेलू उद्देश्य र आवासीय लागि कोठा रूपमा तलामा यन्त्रको लागि सम्भव छ लागू हुन्छ।
को पाठ्यक्रम, तपाईं screed घनघोर सुरु गर्नु अघि, तपाईंले तपाईँले किन्न आवश्यक धेरै सामाग्री कसरी पाउन गर्नुपर्छ। यो सुक्खा मिश्रण 40 र 50 किलो बैग बिक्रि छ। M300 peskobeton प्रति 1m2 सतह 1 सेमी को एक पत्र मोटाई मा खपत 20 किलो छ। त्यसैले, एक युग्मक2सेमी एक 40 किलो मिश्रण वा झोला आवश्यक हुनेछ। कोठा को क्षेत्र ज्ञान, यसलाई आवश्यक मात्रा गणना गर्न सजिलो छ। यसरी, 100 m2 को घर मा 100 बैग लाग्छ।
अर्को, गरेको दिइँदैन गर्न सकिन्छ धेरै सामाग्री कसरी हेरौं। यो गर्न, पाठ्यक्रम, तपाईं यसलाई खर्च के जान्नु आवश्यक छ। 40 किलो बैग मा Peskobeton लगभग 150 rubles लागत। यसरी, 100 मिटर2को निर्माण क्षेत्रमा screed2सेमी लगभग 15000 rubles खर्च हुनेछ। chetyrehsantimetrovuyu मा छोड्नु, क्रमशः, 30,000 पृ।
पारंपरिक सिमेन्ट झोला M400 50 किलो बालुवा 1x3 1 मिटर2desyatisantimetrovyh screed लागि पर्याप्त को चक्रवृद्धि अनुपात प्रदान। त्यो5मिटर2दुई-centimetric छ। 200 rubles बारेमा लायक सिमेन्ट एक झोला। यसरी घर 100 मिटर220 बैग छोड्नुहोस्। फलस्वरूप, 4000 rubles मा लागत screed2सेमी बालुवा को लागत बाहेक 8000 पी मा - (क्यारियर - पृ 130-170 प्रति टन।),4सेमी। अन्त मा, सिमेन्ट-बालुवा मिश्रण को सामान्य screed धेरै सस्ता लागत।
तथापि, गुणस्तर घर एकदम सानो ठोस peskobeton पकाएको। उत्तरार्द्ध को भाग मा सबै कुरा। तयारी मा peskobeton बालुवा फरक तत्त्वहरू प्रयोग। विभिन्न आकार को कणहरु को गणना अनुपात भनेर अन्ततः बलियो अधिकतम, आयोमी स्थिरता, सतह को खुर झुकाउ छैन गरियो। घर मा, यो गुण को एक मिश्रण तयार, पाठ्यक्रम, सफल छैन।
जग निर्माण मा Peskobeton M300 खपत
टाढा किलो 1 मिटर3200 किलो मा peskobeton त्यसैले लगभग 20 सेन्टिमिटर को एक मोटाई मा प्रति 1 मिटर समाप्त सतह को2खरीद गर्न वा 50 किलो4बैग छ। विस्थापन आवास जग 100 मिटर2(40 मिटर - लम्बाइ) 110 मिटर (70 र 40 जमीन मुनि - टोपी) मा यसको उचाइ मा, र 40 सेमी को एक मोटाई 17.6 मिटर3बराबर छ। फलस्वरूप, यसको निर्माण 17.6 70.4 X4= 71 वा 50 किलो को झोला खरिद गर्न आवश्यक छ।
Peskobeton बारेमा 170 पृ एक कन्टेनर खडा। यो भुक्तानी गर्न हुनेछ 71 X 170 = 12070 पी हो। धेरै उपयुक्त भौतिक - तपाईं जग निर्माण को लागि, देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा छ छैन त ठूलो, खपत जो Peskobeton M300 (50 किलो)। अन्ततः 12070 पी। - राशि छैन त ठूलो छ।
त्यसैले peskobeton प्रति 1m2 M300 खपत (1 सेमी को एक मोटाई संग) 20 किलो छ। सिमेन्ट, हामी बाहिर फेला कम। जग (1x3 अनुपात लागि) आवास 100 मिटर2मा 27 बैग, र भवन जग को यसैले लागत आवश्यक र बहिष्कार बालुवा 27 X 200 = 5400 पृ हुनेछ। लगभग लगभग 6000-7000 rubles - बालुवा। वरिपरि 5500-6500 rubles - रोडा वा Rubble प्रयोग गर्दा। तथापि, यस्तो जग गुणस्तर एकदम उपज peskobeton गरिनेछ।
कसरी समाधान गर्न
त्यसैले, हामी तपाईंलाई यस्तो बालुवा ठोस M300 रूपमा जग वा screed सामाग्री भर्न आवश्यक हुनेछ कति, तपाईं फेला परेन। एक निजी घरमा सम्भाव्य निर्माण यो सामाग्री प्रयोग प्रवाह यसलाई पर्याप्त ठूलो छ, तर सामान्य मा। निस्सन्देह, यो सामाग्री प्रयोग सही ब्याच गर्नुपर्छ। यसलाई निम्न अनुक्रम मा यो कार्य गर्न सबै भन्दा राम्रो छ:
आवश्यक मात्रा क्षमता न्यानो पानी हालिएको (25 GR 15 देखि।)। प्रवाह दर समाधान को उद्देश्य आधारमा प्रति किलोग्राम peskobeton 0.18-0.23 लिटर हुनुपर्छ।
यसबाहेक, पानी नै वास्तवमा ड्राई मिश्रण पोखे।
परिणामस्वरूप ठूलो राम्ररी पनि सबैभन्दा सानो गांठ, सबै सम्म भरिएर पोखिन्छ। समाप्त मिश्रण पूर्ण homogeneous छ।
समाधान प्रयोग2घण्टा भित्र हुनुपर्छ। +5देखि +35 ग एक तापमान मा अनुमति peskobeton M300 काम। एक तयार समाधान पानी थप गर्न सकिँदैन। समय समयमा हावा बुलबुले हटाउन खम्बा वा बेल्चा रड प्वाल पार्ने काम गर्न मिश्रण कास्टिंग को प्रक्रिया मा। तयार मिश्रण सुक्खा समय - दिन। को screed हिंड्न पछि एक हप्ताको हुनेछ। जग संग Formwork मा दोस्रो दिन हटाइएका छन्। 28 दिनमा बालुवा ठोस लाभ को अन्तिम बल, पारंपरिक ठोस रूपमा अर्थात्। एक मोटाइ भन्दा2सेमी संग टाई Reinforcing आवश्यक छ। निस्सन्देह, ढांचे स्थापना र जग घनघोर गर्न आवश्यक हुनेछ। मिश्रण मा चोट प्रयोग गर्दा थप छैन। आफ्नो भूमिका बालुवा (3-7 मिमी) को ठूलो कणहरु द्वारा प्ले छ। Waterproofing सामान्य तरिका बनेको छ।
सबै माथि हामी एक सरल निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं। लागत बालुवा ठोस नींव र screeds महंगा सिमेन्ट र बालुवा। तसर्थ, यो सामाग्री प्रयोग गर्न उचित छ जब समाप्त डिजाइन को आफ्नो अन्तिम मूल्य द्वारा प्ले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खुर वा आवश्यक प्रतिरोध। Peskobeton, उदाहरणको लागि, - पर्खालहरु को निर्माण मा ठूलो छैन पनि बलियो र aerated ठोस ब्लक छ।
आफ्नो हातमा इँटा देखि BBQ
एक ग्यारेज कसरी लिफ्ट गेट चयन गर्न छ?
आफ्नो हातले aerated ठोस को एक ग्यारेज कसरी निर्माण गर्ने?
कसरी काठ घरमा न्यानो तल्ला स्थापना गर्न
Tatarstan मा मुख्य नदी: फोटो को एक संक्षिप्त विवरण
मास्को मा Pashkov हाउस। मास्को मा Pashkov हाउस, पर्यटन, फोटो, ठेगाना
सापेक्षताको विशेष सिद्धान्त। जग
नर्डिक चरित्र: सुविधाहरू
Danilchenko Viktoriya Borisovna: जीवनी, फोटो र रोचक तथ्य
व्यापक myocardial infarction: को विकृति, निदान, लक्षण र नतिजा को प्रकृति।
तपाईंको तालिका गर्न केले पाइ! स्वादिष्ट र प्रकाश मिठाई
बेल खुर्सानी, बगैंचामा तिनीहरूलाई बढ्दै
आफ्नै हातले एक आश्चर्यजनक मिलाउने स्कूटर कसरी बनाउने?
एक वास्तविक सर्बियन कख कसरी तयार